Shintsha ukubonakala ku-KDE nge-QTcurve | Kusuka kuLinux
Tesla | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso
Namuhla ngize ukwenza lokhu kufundisa okuncane kokuthi ukubukeka kuhleleke kanjani ku- KDE bese uchaza, ngangokunokwenzeka, isakhiwo izingqikithi ze- KDE uma kuqhathaniswa nezindawo ze-GTK.
Abasebenzisi abaningi lapho behlola KDE phawula ukuthi izingqikithi zedeskithophu ziyinkimbinkimbi ukufaka kanye / noma ukumisa. Ezindaweni zedeskithophu ezinjenge-XFCE noma, manje esezicishe zaphela, izinto ze-Gnome 2 bezilula kakhulu: landa itimu, uyivule bese uyihambisa kufolda ethile yohlelo.
Lokhu akunjalo ku- KDE, neqiniso, abantu abaningi kubandakanya nami, besingazi ukuthi singaguqulwa kanjani itimu. Muva nje, ngenze ukweqa kusuka ku-XFCE kuye ku- KDE ngikhuthazwe ngamazwana nokuthunyelwe kule blog okungenze ngazama futhi.
Ngakho-ke, bekufanele ngiziphoqe ukuthi ngifunde ukuguqula izingqikithi bese ngizozama ukuchaza izinto engikwazile ukubaleka kuzo. Kulesi sifundo sizosebenzisa isihlobisi sefasitela Qtcurve ngokuba yilokho engikusebenzisa njengamanje. Kodwa-ke, inqubo yabanye abahlobisi ngeke yehluke kakhulu.
Ngakho ake siqale!
Into yokuqala ukuphawula kancane ngesakhiwo sezingqikithi ku-KDE. Lezi izi:
Itimu yedeskithophu yePlasma. Lokho, ingqikithi ideskithophu yethu ezoba nayo, yayo amawijethi, ama-taskbars nemenyu yabo
Umhlobisi wewindi. Izindikimba ze-Kwin. Kulokhu sizosebenzisa Qtcurve.
Isitayela sezinhlelo zokusebenza. Lokhu kuzoguqula ukubukeka kwe- Qtcurve nokusetshenziswa kwamafayela .qurcurve.
Uhlelo lombala. Njengoba igama liphakamisa, lokhu kuphatha imibala ehlukile ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza: umbala wefonti, umbala wangemuva, umbala ogqamile, njll.
Izithonjana. Phatha itimu yesithonjana.
Ukubukeka kwe-GTK. Kulabo bethu abathanda izinhlelo ezithile ze-GTK futhi abanendaba nokubukeka kwabo okuphansi KDE
Lapho nje sesibuyekeze uhlelo oluyisisekelo olulandela isihloko ku-KDE, sizobona ukuthi siziguqula kanjani zonke izici. Sizoqala nge Qtcurve. Ukufaka konke okudingayo ku-Debian nakokuphuma kokunye:
Njengoba ukwazi ukubona, amaphakheji afakiwe futhi ukuthuthukisa ukubukeka kwezicelo ze-GTK. Uma lokhu sekwenziwe sizokwenza kanjalo Izintandokazi Zesistimu -> Ukubukeka Kwendawo Yokusebenzela -> Ukuhlobiswa Kwewindi futhi lapho sibheka Qtcurve. Ngalesi sikhathi, imingcele yefasitela izoshintsha futhi ibukeke ingajwayelekile. Ungakhathazeki, manje siyayixazulula.
Isinyathelo esilandelayo ngemuva kwamawindi ethu sisebenzisa umhlobiso Qtcurve funa itimu (* .qtcurve file) nohlelo lombala (* .colors file). Ukuze uthole lokhu singaya I-KDE-Bheka uya ukuphambuka bese ukhetha eyodwa esiyithanda kakhulu. Ngokukhethekile, ngikhethe eyodwa enokubukeka okuyisisekelo, ngoba bekuyiyona eseduzane engiyitholile kungqikithi ye-greybird engiyisebenzise ku-XFCE.
Uma ingqikithi ilandiwe, ngokujwayelekile sizoba namafayela amabili: elilodwa elinefayela le-.iqurc nenye enwetshiwe.imibala. Ukuzisebenzisa sizoya ku- Izintandokazi Zesistimu -> Ukubukeka Kohlelo Lokusebenza -> Isitayela.
Kuleli qophelo sizosebenzisa imenyu yokudonsela phansi ukukhetha Qtcurve, futhi sizosebenzisa inketho Setha ukufaka okuncamelayo kwe Qtcurve. Ngalesi sikhathi, sinikeza Ngenisa futhi sibheka ifayela .qurcurve ukuyisebenzisa.
Ngemuva kwalokho i- isikimu sombala. Ngaphakathi kwimenyu Ukubukeka kwezicelo, sikhetha ithebhu Imibala. Sibona inketho esivumela ukungenisa izikimu zombala: Ngenisa i-schema. Sibheka ifayela le-.colors esililandile futhi sizoba netimu ebumbene kakhulu noma kancane.
Kepha, asikenzi lutho ngayo Itimu ye-Plasma, izithonjana nezinhlelo zokusebenza ze-GTKAke sifike kukho!
Uma ngaphakathi kwemenyu Ukubukeka kwezicelo Siya kuthebhu ye-Icons futhi sizobona inketho okuyiyo Faka ifayili yetimu. Le nketho izosiyisa ekukhetheni ingqikithi yesithonjana esiyilandile ngaphambilini.
Mayelana nodaba lokuvela kwe-GTK, ngendlela efanayo nokuthi kunethebhu yezithonjana, kukhona enye ye-GTK. Siya kuyo futhi uma sesingaphakathi singakhetha itimu esizoyisebenzisa kanye nezimpawu, ifonti nokunye. Sikhetha izithonjana ezifanayo nangaphakathi kwengqikithi Qtcurve.
Ukuze uqede, udinga nje ukukhetha okuhle Itimu ye-Plasma, esiyilandile kusuka kuwebhusayithi yethu yetimu esiyithandayo, futhi sayivula ku:
Ngokuyikhetha kamuva kusuka: Izintandokazi Zesistimu -> Ukubukeka Kwebhentshi -> Itimu Yedeskithophu.
Futhi ngalokhu senziwe! Njengoba ubonile, amathuba wokwenza ngokwezifiso muhle impela. Yize ekuqaleni kungabonakala kunzima kakhulu, ekugcineni ukujwayela futhi uguqule izingqikithi ukuze ziphelele.
Ngiyabingelela futhi ngithemba ukuthi kuyakusiza ukuthi uthuthukise amadeski akho !!
Njengoba ulimi ideskithophu ekulo alulona olweSpanish, amagama ezigaba ezahlukahlukene angahluka kancane. Kodwa-ke, kukhona izithombe zezinyathelo eziyinkimbinkimbi kakhulu noma ezingase zingabi enembile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Shintsha ukubonakala ku-KDE nge-QTcurve
Kuyadabukisa ukuthi i-qtcurve ayihambelani ne-gtk3, ngiyethemba ukuthi abayifaki i-firefox ne-chrome ku-gtk3 xD kepha ukuthengiselana kuphelile.
Ngabuyela ku-Oxygen, ngoba inokwesekwa kweGTK2 ne-GTK3.
Futhi ngiseku-Oxygen futhi konke kungihambela kahle. Ake sibone ukuthi ngingakushintsha yini ukunciphisa, ukukhulisa nokuvala izithonjana zalezo i-Elementary enazo (ngendlela, ezinhle kakhulu).
Ngibabethela izukitwo kanye nokuphela kwendaba xD noma i-orta nayo eyehla i-xD yize ithinta amabhola ami ukuthi kunzima kakhulu ukushintsha umbala wezindikimba ze-gtk ¬¬, kufanele ngiguqule amafayela okuthi uma ehle isimo sisebenzisa imibala engiyibekayo, kepha uma kungenjalo ¬¬,
ULuis Adrián Olvera Facio kusho
Hewu !! Tete Plaze uhlala njalo ulayini ofanayo nowami, shiya inqwaba yamazwana kokunye kokulahlekile.
Phendula uLuís Adrián Olvera Facio
Akufanele bafune ukusekela i-gtk3 ngoba ama-gnomes ayishintsha njalo kuhlobo lwe-XO
Engikwenzile mayelana nalolo daba, ngoba ngisebenzisa i-KDE kepha ezinye izinhlelo zokusebenza ze-gtk3, bekuwukusebenzisa itimu ebizwa ngokuthi i-adwaitish ye-qtcurve, ngakho-ke ibukeka kahle kakhulu.
Futhi ungakhohlwa okusobala, kuhlanganiswe nemibala yangokwezifiso, ubuhle!
Kepha, ngemali yokuthi ukubuka kuqala kwevidiyo kungabonakali, futhi nokuthi uKamoso akazange akhombise isithombe sekhamera yewebhu.
Imininingwane yakho mihle kakhulu, ngiyabonga kakhulu mngani.